प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - फुजियान जिनजिiang रुचुन शूज कं, लिमिटेड
Safety- जुत्ता र पर्वतारोहण शूज
के तपाईं निर्माता वा ट्रेडिंग कम्पनी हुनुहुन्छ?
हामी दुबै निर्माता र ट्रेडिंग कम्पनी हौं। हामीसँग तीन उत्पादन लाइनहरूको साथ दुईवटा आफ्नै कारखानाहरू छन् र १० भन्दा बढी दीर्घकालीन सहकारी कारखानाहरू छन्।
तपाईको MOQ के हो ??
सामान्यतया प्रति रंग 600prs, प्रति शैली १२०० prs। र यदि तपाईंलाई थोरै मात्रा चाहिन्छ भने हामी अगाडि कुरा गर्न सक्छौं।
के तपाईं हाम्रो आवश्यकता अनुसार नमूनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ?
हो, हामी तपाईंको डिजाइन अनुसार नमूनाहरू बनाउन सक्छौं र तपाईं हाम्रो उपलब्ध शैलीहरू पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। लोगो, र ,्ग, सामग्री, ढाँचा आकार, आदि सबै तपाइँको आवश्यकता पछ्याउन सकिन्छ। हामी OEM र ODM स्वीकार गर्दछौं।
के तपाईं निःशुल्क नमूनाहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ? र नमूनाहरू बनाउन को लागी कति समय?
हामी वास्तविक खरीददारहरूको नि: शुल्क नमूनाहरू प्रति रंग एक टुक्रा प्रदान गर्दछौं र खरिददारहरूले उनीहरूको आफ्नै खाताबाट व्यक्त लागत तिर्नु पर्छ। सामान्यतया हामी नमूनाहरू -15-१-15 दिन भित्र समाप्त गर्दछौं।
तपाईको मूल्य के हो? तपाईंको भुक्तानी सर्तहरू के हो？
हामीसँग हाम्रो आफ्नै कारखानाहरू छन् र उही मात्रा र गुणवत्ताको सस्ता मूल्य प्रस्ताव गर्न सक्षम छन्। हामी हेराईमा L / C स्वीकार गर्दछौं, T / T %०% जम्मा र कागजातहरूका विरुद्ध %०%। यदि तपाईं अन्य भुक्तानी तरीकाको लागि सोध्नुहुन्छ भने, हामी थप कुरा गर्न सक्दछौं।
तपाईं कसरी राम्रो गुणस्तर राख्नुहुन्छ र मलाई कसरी थाहा हुन्छ उत्पादन राम्रो छ?
हामीसँग क्युसी टोली छ जो कारखानाहरूमा छन् र प्रत्येक आदेशहरूको लागि सामानहरूको अनुसरण गर्न र निरीक्षण गर्नका लागि गुणवत्ता र प्याकिंग खरीददारको आवश्यकता अनुरूपको सुनिश्चित गर्न। र हामी पनि हाम्रो कारखानामा निरीक्षण गर्न आएका छौं वा शिपिंग अघि निरीक्षण गर्न तेस्रो निरीक्षण पार्टी नियुक्ति गर्न खरीददारलाई स्वागत गर्दछौं।
तपाईंको उत्पादन नेतृत्व समय के हो?
नमूनाहरूको अनुमोदन पछि samples०-6565 दिनहरू। यो मात्रा, शैली र मौसमहरूमा निर्भर गर्दछ।
तपाईको कम्पनी कहाँ अवस्थित छ?
टियान किन टेक्नोलोजी भवन वेस्ट गार्डन स्ट्रीट जिन्जियांग, क्वानजाउ, फुजियान, चीन।
टियानकिन टेक्नोलोजी भवन, वेस्ट गार्डन डिस्ट्रिक, जिन्जिiang, क्वानजाउ, चीन
बुबा को जुत्ता मिलान पुरुषको Digi को लागी फिर्ता छ ...
फेसन र फुटवेयर नेताहरू "Co ...